INingizimu Afrika izogxila ekudaleni imisebenzi isebenzisa ukuthuthukiswa kwengqalasizinda ukuvuselela umnotho. USLINDILE KHANYILE uyabika | Umbele
URamaphosa izolo wethule uhlelo lokuvuselela umnotho oqedelwe yiCOVID-19, ukade uvele untengantenga. Uthe ukuthuthukiswa kwengqalasizinda yikona okuzoba seqhulwini kulolu hlelo lokudala amathuba emisebenzi njengoba ethe bathemba ukuthi bazokwazi ukuthi badobe abatshalimali abazofaka uR1 trillion.
Ngekota yesibili yalo nyaka, nokuyizinyanga lapho izwe belivalwe khona, bawu-2.2 million abantu abaphelelwe yimisebenzi kwathi umnotho wehla ngo-16.4%.
“Indlela esizokwenza ngayo ngale misebenzi emisha wukuqhamuka nendlela ehlukile yokuqasha kuhulumeni nokuzoqinisa amaxhama omphakathi wonkana. Sizosebenzisa izindlela nezinsiza esinazo emphakathini ukubhekana nezinto ezimqoka emphakathini.
“Sizosungulela intsha amathuba awu-300 000 ukuthi ilekelele njengabasizi ezikoleni ezweni lonke ukuze isize othisha ngeminye imisebenzi ukuze kuzokwanda isikhathi sokufundisa njengoba abafundi belahlekelwe yisikhathi sokufunda ngenxa yeCOVID,” kusho uRamaphosa.
UMengameli uthe kunemisebenzi engaphezu kwewu-60 000 ezovela ngenxa yohlelo lokuvuselelwa nokwakhiwa kwengqalasizinda yomasipala nemigwaqo ezindaweni zasemakhaya.
Ukulekelela kwezempilo khona kuzoqashwa onompilo nabasizi babahlengikazi abawu-6000 njengoba izwe lilungiselela ukwethula umshwalense wezempilo, iNational Health Insurance.
“Ukusiza intsha engasebenzi ukuze ithole la mathuba namanye amathuba maduzane, sizokwethula i-Pathway Management Network, nokuyiziko elizosetshenziswa ukuqasha futhi linike (intsha) nolunye usizo,” kusho yena.
URamaphosa uthe amabhizinisi asafufusa azobamba iqhaza elikhulu kulolu hlelo lokusungula imisebenzi. Uthe kunamabhizinisi amancane aphakathi kuka-2.4 million no-3.5 million asengenza izinto ezinkulu uma engasekwa ngendlela efanele.
URamaphosa uthe lolu hlelo lokuvuselela umnotho luzogxila nasekuvuseleleni izimboni, nathe enye indlela ezosetshenziswa ukwenza loku ukwandisa imikhiqizo eyenziwa ezweni ukuze kuzoncipha inani lalezo ezithengwa kwamanye amazwe.
“INingizimu Afrika ithenga izimpahla zenani likaR1.1 trillion kwamanye amazwe, uma ungawubali uwoyela njalo ngonyaka. Uma singakhiqhiza u-10% nje walezi zimpahla lapha ekhaya, singakhulisa umnotho wethu ngo-2%,” kusho yena.
Uthe uma elakuleli lingakhiqiza okungenani u-2% kulezi zimpahla zenani likaR2.9 trillion i-Afrika yonke ezithenga kwamanye amazwe, loko kungafaka u-1.2% emnothweni.
Uthe maduze ngokubambisana nabezimboni nezinyunyana, bazoshicilela uhla lwezimpahla kwezolimo, ezempilo, ezokwakha nezokuthutha okuyizona okumele kubhekwe kuzona ukuthi zikhiqizwe ezweni.
“Sinxusa wonke umuntu wakuleli ukuthi afake isandla kule mizamo yokuvuselela (umnotho) ngokuthi akhethe ukuthenga izimpahla zakuleli nokweseka amabhizinisi akuleli,” kusho uRamaphosa.
Enye yezinto eziphazamisa umnotho yinkinga kagesi, nathe nayo iyasukunyelwa njengoba ethe kulindeleke ukuthi kwandiswe ugesi ophehlelwayo ezweni ngo-11 800MW kule minyaka emithathu ezayo.
Uthe zikhona nezinhlelo zokukhulisa imboni esebenza ngobuchwepheshe besimanjemanje kanti bamatasa nokwehlisa amanani e-data, okade kwakhalwa ngokumba kwawo eqolo.
Umbele uzoyihlaziya ngokugcwele inkulumo kaRamaphosa nosomnotho nabahlaziyi ngesonto elizayo.
Ukusutha indaba yokubuyela emsebenzini ngemva kwe-lockdown kumfake intshisekelo yokuqala ibhizinisi lokusabalalisa umvini nezinyembezi zikaKhwini. Umsunguli walo uxoxe noLANGA KHANYILE